सलमान खानले बिग बोसमा राखी शावन्तलाई यसरी थर्काए , राखी भईन् डरले थर्र थर्र – OSNepal
सलमान खानले बिग बोसमा राखी शावन्तलाई यसरी थर्काए , राखी भईन् डरले थर्र थर्र
बिग बोसको आगामी विकेन्ड का वारमा सलमान खान एंग्री मोडमा देखिने भएका छन् । सलमानको गाली धेरै प्रतियोगीलाई भारी पर्ने भएको छ । तेजस्वी प्रकाशपछि यो हप्ता राखी सावन्तलाई पनि सलमान खानले निशाना बनाउँदै छन् । शनिबारको एपिसोड सलमान खानलाई राखीको पक्षपाती भएको आरोप लगाउनेहरूका लागि हेर्नै पर्ने हुनेछ।
शोमा सलमान खानले राखीलाई गाली गरेका थिए । यससँगै उनको मनोरञ्जन पनि बोरिङ भएको बताइएको छ । पक्कै पनि सलमान खानको यो गाली राखी सावन्तका लागि ठूलो पाठ हुन लागेको छ । प्रोमोको भिडियोमा सलमान खान भन्छन् – राखी सावन्तलाई सबै थाहा छ, यदि तेजस्वीले फिनाले वीकको टिकट पाउँछ भने करणको जित्ने सम्भावना ९९ प्रतिशतले घट्छ ।
तिमी दण्ड दिइरहेका छैनौ, न्याय दिइरहेका छौ। त्यसोभए तपाईंले यो बताउन करणलाई किन रोज्नुभयोरु राखी सावन्तले आफ्नो स्पष्टीकरणमा भनिन्–करण कुन्द्रा तेजस्वीका प्रेमी हुन् । उनीहरु निकै भावुक हुन्छन् । राखीको कुरा सुनेपछि सलमानले भने( तिम्रो अनुसार तेजश्वि करण कुन्द्राका लागि खतरा हो । तपाईं यो भन्न चाहनुहुन्छ ? राखी सावन्तले यसमा सहमति जनाइन् । हालै राखी सावन्तले तेजस्वी र करण कुन्द्रालाई आफ्नो निकटता कम गर्न सल्लाह दिएकी थिइन् ।
यसबारे सलमानले पनि प्रश्न उठाएका छन् । जवाफमा राखीले भनिन् सर, जब म यी दुईलाई टाँसिएको देख्छु, मलाई केही हुन्छ । मलाई तिनीहरूको ईर्ष्या लाग्छ। सलमानले राखीलाई गाली गर्दै भने– तिमीले यो शो करणले मात्र जित्छ। तिमिलाई यो सबै कसरी थाहा छ ? जबकि शोका निर्मातालाई पनि थाहा छैन । तिमि अरूको सट्टा आफैमा ध्यान केन्द्रित गर ।
जब तिमी पहिलो पटक कार्यक्रममा आयौ , तिमी मनोरञ्जन गर्नुहुन्थ्यो। अब भने अल्छीपनमा आयो । सलमान खानको यो आक्रमणपछि राखीले आफ्नो खेलमा के परिवर्तन ल्याउछिन्, त्यो भने आगामी एपिसोडमा थाहा हुनेछ । यो सिजन राखी बोरिङ छ भनेर सलमानको भनाइमा फ्यानहरू सहमत हुनेछन् ।